Didier Drogba Oo Soo Bandhigay Shirkii Iyo Odhaahihii Chelsea Ka Caawiyay Koobka Champions league. - Gool24.Net
Didier Drogba Oo Soo Bandhigay Shirkii Iyo Odhaahihii Chelsea Ka Caawiyay Koobka Champions league.
Halyayga kooxda Chelsea ee Didier Drogba ayaa si layaableh uga sheekeeyay qaabkii ay kooxdiisii hore ee Blues ugu hor seedeen koobka kaliya ee ay ka haystaan UEFA Champions League.
Didier Drogba ayaa shaaciyay in markii ay ceebta kala soo kulmeen kooxda Napoli ee kulankii lugtii hore ee 16ka Champions league in ay ciyaartoydii kooxdiisa Blues yeesheen shir gabi ahaanba ay xaalada ku baddaleen.
Didier Drogba ayaa shaaciyay magacyadii shirkaas ka hadlay kuwaas oo kala ahaa John Terry, Frank Lampard iyo goolhaye Petr Cech wuxuuna sidoo kale Didier Drogba xusay in Juan Mata uu ka codsaday in uu ka caawiyo in koobkan ay ku guulaystaan.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo turjuntay sheekada uu Didier Drogba ka soo bandhigay qaabkii ay ciyaartoy ahaan u qaateen masuuliyadii koobka Champions League halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
Didier Drogba ayaa yidhi: “Siddeed sanadood ka hor waxay kooxdu shaqada ka caydhisay tababaraha, ka ciyaartoy ahaan waxaanu yeelanay shir kaas oo aanu ku aqoonsanay in aanu qayb ka ahayn shaqo ka caydhinta bixitaankiisa”.
“Kabtan John Terry ayaa hadlay, Frank Lampard, Petr Cech iyo sidoo kale hogaamiyaashii kooxda. Waxaanu go’aan ku gaadhay in aanu wax walba siino tartankan (Champions Leage) inkasta ay kulankii Napoli naga soo gaadhay guuldaradii 4-0 ka ahayd”.
“Waxaanu koobkan baacsanaynay siddeed sanadood isla markaana maanu gaadhin wax ka fiican kaalinta labaad. Qof kastaaba waxa uu ogolaaday in meel layska dhigo shaqsiyada oo mid kastaaba uu kaayaga kale kula tartamo hadaf isku mid ah”.
“Kadib shirkaas waxaan da’yarkii 23 sano jirka ahaa ee Juan Mata ka codsaday: “Maamule fadlan aniga iga caawi in aan ku guulaysto Champions League. Waxa uu isagu ii soo eegay sida: ‘Ninyahow miyaad waalan tahay. Adigu waxaad tahay Didier Drogba, waxaad doonaysaa in aad aniga iga caawiso in aan isaga ku guulaysto”.
“Kadib waxaan isaga u sheegay in aan halkan siddeed sanadood joogay oo aanan waligay ku guulaysan isaga. Sidaa daraadeed, waxaan aaminsanahay in adigu aa tahay in aad naga caawiso in aanu ku guulaysano. Xataa hadiyad ayaan ku siin doonaa haddii aynu ku guulaysano taas oo ahayd dhamaadkii February”.
“Saddex bilood kadib waxaanu joognay Munich ee finalkii ee garoonka oo ay mawjado casaan ahi joogaan. Marti galiyaashu waxay hogaanka qabteen markii ay ciyaartu socotay 8 daqiiqo, dariiqii aan kubbada ku laagi lahaa ee sidddeedaas daqiiqo aad ayaa la ii niyadjabiyay”.
“Da’yarkii Mata ayaa aniga iyagu yidhi: ‘Didi aaminsanow, waxaa waajib kugu ah in aad aaminsanaato”. Ugu dhawaan ilmo ayaan kaga jawaabay kadib markii aan natiijada iyo waqtiga eegay; Aaminaad maxay ah? Ugu dhawaan way dhamaatay!”.
“Watigii ugu danbeeyay, koornihii ugu danbeeyay, waxaan u jeedaa koornihii anaga noogu horeeyay oo ka dhan ah 18 kii koorne ee Bayern Munich, qiyaas cidii qaadatay koorne tuuristaas, waa Juan Mata, inta soo hadhay waa taariikh!
………………………………………………………. CASHURKU WUXUU YAHAY MARKASTABA RUMAYSNOW……………….